Fanjifana: mora ny vidin’ny legioma | NewsMada
Fanjifana: mora ny vidin’ny legioma
Vokatra ny anana sy ny legioma amin’izao vanim-potoana aty ririnina izao. Mitombo koa ny isan’ny mpivarotra azy satria maro ireo very asa. Hanomboka hiaka-bidy izany manomboka ny volana septambra.
Miaina kely ny mpanjifa ! Saika mora avokoa ny ankamaroan’ny vidin’ny legioma sy ny voankazo sasany eny an-tsena amin’izao fotoana izao. Raha ny eny Andravoahangy, nidina ho 700 Ar hatramin’ny 1 000 Ar ny kilaon’ny ovy, raha 1 200 Ar hatramin’ny 1 400 Ar teo aloha. Nihena ho 1 000 Ar ny chou fleur iray raha 2 000 Ar ny teo aloha, nidina ho 500 Ar ny kilaon’ny karaoty raha 800 Ar ny teo aloha. Lasa 600 Ar ny kapoakan’ny tsaramaso lena sy ny petit pois, raha 800 Ar ny teo aloha. Nidina ho 1 000 Ar hatramin’ny 1 200 Ar koa ny kilaon’ny akondro raha 1 400 Ar hatramin’ny 1 700 Ar ny teo aloha. Manodidina ny 1 200 Ar ny tongolobe raha mihoatra ny 2 000 Ar tany aloha.
Santionany ihany ireo no­taterina ireo, saingy hita taratra fa nihem-bidy amin’ny ankapobeny ny vidiny. Namba­ran’ny mpivarotra eny Andra­voa­hangy fa fotoana fahavokaran’ny legioma izao vanim-potoana izao. Nambolen’ny tantsaha vao nanomboka nitsahatra ny orambe, ny volana avrily sy mey, ny nahatonga izany, satria eo amin’ny telo hatramin’ny efa-bolana eo ny faharetan’ny fambolena azy ireny.
Nitombo isa ny mpivarotra
Nisy fiantraikany amin’ny vidin’ny legioma koa ny fe-potoana voafetra amin’izao tranga Covid-19 izao. Nilaza Rasoanantenaina, mpivarotra ovy eny Mahamasina, fa “mijanona tsy mahazo mivarotra izahay hatramin’ny 12 ora antoandro. Sakafo mora simba anefa ny legioma ka tsy azo tahirizina maharitra fa iray na roa andro ihany ny ankamaroany ka voatery tsy maintsy amidy mora. Tsy manambola rahateo ny mpividy sady nitombo be ny isan’ny mpivarotra legioma satria marobe ny very asa ka nivadika nivarotra avokoa ny ankamaroan’izy ireny”.
Nilaza ny mpivarotra fa hanomboka hiaka-bidy indray ny legioma manomboka amin’ny volana septambra, fotoana fiantombohan’ny maitsoahitra.